စုစုပေါင်း ၁၆၀ ၀၀၀ဒေါ်လာကျော်တန်ဖိုးရှိသည့် လက်ဆောင်များကို FBSမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်!
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် FBS၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်. မွေးနေ့ပွဲမှာ အံ့မခန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထောင်ပေါင်းများစွာသော ဖောက်သည်များထံမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းပို့စ်ပေါင်း ရာပေါင်းများစွာကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ထရိတ်ဒါများအတွက်လဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ဆောင်များကို ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်. မှန်ပါသည် - ဖောက်သည်များထံမှ လက်ဆောင်မယူဘဲ ဖောက်သည်များအား ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ လက်ဆောင်ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်!
"FBS: ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအကျိုးဆောင်၏ ၉နှစ်ပြည့်" အားလုံးအတွက်-လက်ဆောင်-ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး လက်ဆောင်များရယူရန် ဖောက်သည်များအား ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်:
• အံ့အားသင့််ဖွယ် drones
• Wireless HD စတီရီယို စပီကာ
• Forerunner® 735XT စမတ် နာရီ
• ၁$ ၃$ ၉$ အစရှိသည့် ငွေသားဆုများ
• တစ်နှစ်အာမခံ VIP အဆင့် လက်မှတ်
• ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဈေးကွက်သုံးသပ်သူတစ်ဦးနှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံခွင့်
• FBS တံဆိပ်ပါ တီရှပ်များ
• ၁၀ဒေါ်လာတန် Metatrader လက်မှတ်များ
– လက်ဆောင်တန်ဖိုးစုစုပေါင်း ၁၆၀ ၀၀၀ဒေါ်လာကျော်!
အချိန်တိုင်း ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးပါ. မိတ်ဆွေတို့၏ ယုံကြည်အားထားမှုနှင့် ထရိတ်ဒင်းကိုမြတ်နိုးမှုများမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ ယခုကဲ့သို့ အောင်မြင်မှုများရရှိမည်မဟုတ်ပါ. အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရင် တောင်ကြီးကိုတောင် ရွှေ့ပစ်နိုင်ပါတယ် - ကြိုးစားလိုက်ကြပါစို့!
အသေးစိတ်ကို သိရှိရန် မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ.